Wafdi ka socda Puntland iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka oo maanta tagaya Kismaayo – idalenews.com
Wafdi ka socda Puntland iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka oo maanta tagaya Kismaayo
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in wafdi heerkiisu sareeyo oo ka socda Maamulka Puntland ayaa lagu wadaa inay maanta ku biiraan shirweynaha maamul u sameynta deegaanada jubooyinka iyo Gedo ee ka socda magaalada Kismaayo.
Qaban qaabada lagu soo dhoweynayo wafdigan ayaa ka socota magaalada Kismaayo, iyadoo maamulka KMG uu qiray in wafdi ballaaran oo ka socda Puntland ay maanta soo gaari doonaan Kismaayo.
Gudoomiyaha Gudiga shirweynaha Kismaayo Macalin Maxamed Ibraahim ayaa sheegay in wafuuda ka socda Puntland ay qeyn weyn ka qaadanayaan shirka, isagoo xusay in aad magaalada looga sugayo.
“Wafdiga ka imaanaya Puntland aad baa loo sugayaa, in Madaxweyne C/raxmaan Faroole isaga imaanayo ama wasiiro soo dirayo waa dhici kartaa, laakiin wafdiga Puntland shirka ayay qeyb weyn ka qaadanayaan”ayuu yiri Macalin Maxamed.
Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Faroole ayaa si toos iyo si dadban u taageerayay shirweynaha Kismaayo ee la doonayo in loogu wanqalo maamul goboleedka Jubbaland, iyadoo dhaqaalaha ugu badan shirka ku baxayana la sheegayo in Puntland bixineyso.
Hadii C/raxmaan Faroole ka dego Kismaayo ama wafdi ka socda Puntland tagaan ayaa loo arkaa mid weji cusub gelineysa shirweynaha Kismaayo, isla markaana taageero weyna ka helayo mid ka mid ah maamulada dalka ugu weyn.
Dhinaca kale Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka oo gaaraya labaatameeyo ayaa maanta ku sii jeeda magaalada Kismaayo, si ay uga qeyb qaataan dadaalada lagu dhex dhexaadinayo dowladda iyo Maamulka KMG ah ee Kismaayo.
Xildhibaanada tagaya Baydhabo ayaa waxaa ka mid ah C/rashiid Maxamed Xidig iyo C/risaaq Jurile, waxaana la filayaa inay la kulmaan maamulka KMG ee Kismaayo.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Xildhibaanada ay taageersan yihiin shirka, isla markaana marka ay tagaan Kismaayo ka qeyb galayaan shirweynaha maamulka loogu sameynayo, iyadoo Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka ay ka soo horjeesteen.
Xildhibaanadan ayaa tagaya Kismaayo, iyadoo uu wali furan yahay kalfadhiga labaad ee baarlamaanka, inkastoo qaar ka mid ah xildhibaanada ay sheegeen in socdaalkooda ay la socdaan Gudoonka Baarlamaanka.
Dowladda Soomaaliya ayaa mowqif cad iska taagtay shirweynaha Kismaayo, iyadoo cadeysay wixii ka soo bara shirkaas aan loogu aqoonsan doonin maamul goboleed, maadaama aanay shirkaas ka muuqan hogaankii dowladda.
Ra’iisul Wasaare Saacid oo mar kale ku celiyay mowqifka dowladda ka istaagtay shirka Kismaayo
Col. Xasan Maxamed Nuur (Shaatigaduud) oo xalay ku geeriyooday dalka Jarmalka